Poidełko → Mvura poindi
Water Point semumiriri wega Elkay muPoland inopa bhodhoro remvura uye zvitubu mvura kunwa chitubu uye kunwa matsime emvura, ezvikoro nemayunivhesiti, zvivakwa zvehofisi, mashopu ekushambadzira, zvidyarwa zvekugadzira, makirabhu ekusimbisa, nzvimbo dzemitambo, nhandare, nhepfenyuro, nzvimbo dzehutano, horo dzevaraidzo, nzvimbo dzemitambo, mafirimu, mahofisi ehurumende, mapaki, nzvimbo dzekutamba, nhandare, nezvimwe.
Makambani eElkay anotungamirwa muDowners Grove, Illinois, ine zvivakwa zvekugadzira zvinhu muUnited States, zviitwa nedzimwe nyika muChina neMexico zvinoshanda misika yepasi rose.
Dual-chinangwa chekunwa ndiro - LZS8WSS2K modhi
Iyi mhando mubatanidzwa wechiteshi chemvura yekuzadza bhodhoro uye chinonwiwa kupedza nyota yako zvakananga usingashandisi mimwe midziyo. Iyo mhinduro yakakodzera yezvikoro, mayunivhesiti, zvivakwa zveveruzhinji, kusanganisira makirabhu akasimba, mahofisi uye zvipatara.
Panguva imwecheteyo, iyo inozivisa hutsva hutsva hwehuchenjeri nekuzivisa vashandisi nezvehuwandu hwemabhodhoro epurasitiki akachengetedzwa nekuda kweiyi nzira yekushandisa mvura.
Green Kubiridzira - Inoratidza huwandu hwemabhodhoro epurasitiki akachengetedzwa.
Graphic yefaira rekuongorora (mhando nefirita chete) - Girini, yero, uye tsvuku maLED anoratidza mamiriro efaipi.
Laminar rukova - Yakadzokororwa kuzadza ruzha - inova nechokwadi chekuyerera kuyerera uye mashoma spatter
mvura, 4-6 l / min.
Anochinjika spout - Flexi-Guard inodzivirira kubva kukuvara kwemushandisi. Iyo ine chekura inodzivirira kubva mukukura kwehutachiona.
Magetsi sensor activation -Kusina-kusangana uye hutsanana mashandiro ne otomatiki switch-off mushure memasekondi makumi maviri ekusaita basa.
Zvikoro uye makoreji
Makirabhu okusimba uye nezvimwe
Muenzaniso LZS8WSS2K - chishandiso ichi chakagadzirwa ne60% yakagadziriswazve zvinhu, uye yakakodzera kushandiswa nevanhu vakaremara, vana nevanhu vakuru vari pawiricheya.
Kuratidzwa kwakakosha nekwenyaya kunozivisa mushandisi nezvehuwandu hwemabhodhoro epeturu akachengetedzwa, nekudaro anoenderana nemaitiro ezvazvino zvakasikwa.
Yakagadziriswa neyemhando yepamusoro-mhando (tungamira, chlorine, sosi yemukati uye yakagadziridzwa kuravira uye kunhuhwirira) inokwana marita gumi nemaviri emvura uye firiji.
Kana ichishandiswa muzvikoro zvechikoro, inogona kuve neakakosha, inoshanda zvakanyanya, inochinja-chinja Easy-Flex inodzivirira vana kubva mukukuvara. Iyo disenser yekuzadza mabhodhoro inokonzeresa otomatiki ne sensor.
* Izvo zvinogoneka kugadzira chero logotype pane aluminium ndiro.
Chinwiwa - mhando EZS8S
Semhando yepamusoro, inoshongedzwa nefiriji, yepamusoro-soro sefa (lead, chlorine, sosi yemukati uye yakagadziridzwa kuravira uye kunhuhwirira) inokwana marita gumi nemaviri emvura.
Kana ichishandiswa muzvikoro zvechikoro, inogona kuve neakakosha, inoshanda zvakanyanya, inochinja-chinja Easy-Flex inodzivirira vana kubva mukukuvara.
Inokodzera kushandiswa nevanhu vakaremara, vana nevakuru vari pawiricheya.
Chinwiwa - chiisa LZSTL8WSS2K
Iyo miviri-tier set inosanganisira yemhando dzakaratidzwa pamusoro kune vakuru uye vana.
Iyo disenser yekuzadza mabhodhoro inokonzeresa otomatiki ne sensor.
Madziro akagadziriswa mabhodhoro ekuzadza mabhodhi
• yakagadziriswa nebhatani
• iyo yekudonha mvura uye profiling yayo inobviswa
mvura inosara yakasara mumagetsi
• inoshandiswa kuzadza: mabhodhoro emvura, mabhodhoro, majegi
• Yakagadzirirwa kuisirwa munzvimbo dzakaoma
kupinda mains simba
• Green Tricker inoratidzwa yakagadzirirwa 3 maAAA mabhatiri
• yakanakira mahofisi nenzvimbo dzebasa
• yakagadziriswa neasina sensor sensor
• yakakwirira yekuzadza huwandu hwe4,5-6 l / min
• otomatiki kuvharira mushure memasekonzi makumi maviri kwemaserekusaita
Inwa ndiro yakagadzirwa nesimbi yakasvibiswa. Chimiro chakakosha chembiya chinodzora kupararira. Iyo inodzosera-yega yekudzora iyo inodzivirira nekushandiswa kwakanyanya uye haidi kubatwa kana kupindika. Kugadzirisa kukwirira kwejetini kuburikidza neye yakakosha gomba mune bhatani, pasina kutora kunze
Inwa ndiro yakagadzirwa nesimbi yakasvibiswa. Chimiro chakakosha chembiya chinodzora kupararira. Iyo inodzosera-yega yekudzora iyo inodzivirira nekushandiswa kwakanyanya uye haidi kubatwa kana kupindika. Kugadzirisa kukwirira kwejetini kuburikidza neye yakakosha gomba mune bhatani, pasina kutora kunze. Anonwiwa akashongedzwa nemadziro ekudzivirira.
Chinwiwa - mhando dzinodzivirira
Mutsetse wemamodeli ane yakasimba kwazvo chimiro chakagadzirwa nehupamhi hwepamhepo 2 mm satin isineti yesimbi. Yakashongedzerwa mutobvu isina-yakasimba, yakasimba kwazvo chrome-yakavakwa ndarira kubuda.
Kuvhara-kudzivirira, kuzvivhara pachako, hapana-manipulation bhatani nekuvhurwa kwekudzora kukwirira kwejeti.
Inotsungirira yakatarwa ye 250 kg. Kubvumirwa kwevakaremara. Yakakwana zvikoro, nzvimbo dzekutenga, chengetedzo uye masangano ekudzidzisa.
Vandal-proof yakabatanidzwa mvura yekuzadza bhodhoro station nebhodhoro remvura. Inowanikwa nefaira uye kutonhora.
Iyo inovandudza Green Tricker counter inoratidza kuti yakawanda sei mabhodhoro epurasitiki asina kuita tsvina uye anochengetedza nharaunda.
Mutsetse wemamodeli ane yakasimba kwazvo chimiro chakagadzirwa nehupamhi hwepamhepo 2 mm satin isineti yesimbi.
Yakashongedzerwa mutobvu isina-yakasimba, yakasimba kwazvo chrome-yakavakwa ndarira kubuda. Kuvhara-kudzivirira, kuzvivhara pachako, hapana-manipulation bhatani nekuvhurwa kwekudzora kukwirira kwejeti.
Swirlflo® inonwa - fomu yanhasi
Iyo yepamusoro-soro maererano nechimiro, chinwiwa kubva kuUSIRFLO nhepfenyuro, yakagadzirwa nesimbi yepamusoro simbi, ine madziro pani uye hombe yekudzoka chitubu.
Kubvumirwa kwevakaremara. Yakatsaurirwa kune zvivakwa zvehutano, nhandare dzendege, zviteshi uye zvimwe zvinowanikwa neveruzhinji nemahofisi.
Yakabatanidzwa mvura bhodhoro rekuzadza chiteshi neanhasi SWIRFLO inonwiwa yakagadzirwa yepamusoro-simbi isina simbi, ine firita, isina kutonhora, ine madziro pani uye hombe chitubu-yekudzoka bhatani.
Iyo inovandudza Green Tricker counter inoratidza kuti yakawanda sei mabhodhoro epurasitiki asina kuita tsvina uye anochengetedza nharaunda. Kubvumirwa kwevakaremara.
Yakatsaurirwa kune zvivakwa zvehutano, nhandare dzendege, zviteshi uye zvimwe zvinowanikwa neveruzhinji nemahofisi.
Nyoro mativi® anonwa - fomu yemazuva ano
Seti mbiri yevanonwiwa kwevana nevakuru, yakagadzirwa nesimbi yepamusoro-simbi, ine chengetedzo yemadziro yepaneru ine chitarisiko cheanesthetic uye fomu yemazuva ano.
Kubvumidzwa kwevakaremara. Yakakwana kune zvivakwa zveveruzhinji, nhandare dzendege, zviteshi.
Chinwiwa chakagadzirwa nemhando yepamusoro simbi isina huturu, iine firita uye inotonhorera, ine chengetedzo yemadziro yedhiza ine chitarisiko cheanesthetic uye fomu yemazuva ano.
Kudiridza mabhodhoro uye matsime emvura - kunze
Nzvimbo dzinozadza mvura bhodhoro uye vanonwa - ENDURA
Wall-yakaiswa pamvura bhodhoro station, vandal-proof, ine chimiro chakasimba, chakagadzirwa nesimbi inotonhora-simbi, 4,5 mm yakakura.
Kupera kwehupfu, kupisa kwemamiriro ekunze. Rakareruka-kushandisa-bhatani bhatani nechekare-yekuvhara vhara.
Spout ine kuyerera kuderedza mvura splashes ine huwandu hwe4,5-6 l / min. Yakakwana nzvimbo dzekuvaraidza.
Inosimbiswa kune vakaremara. Inowanikwa mune chando chinodzivirira chando - iyo vheji yacho inowedzerwo kubhadharwa.
Chiteshi chemabhodhoro emvura chine chinwiwa uye ndiro kune imbwa, vandal-proof, yakasimba chimiro, chakagadzirwa nesimbi inotonhora-yakavhuvhuwa, 4,5 mm yakakura.
Outer chinwiwa - zvakasikwa zvakaunganidzwa
Iyo ndiro yekumwa yakagadzirwa nesimbi yakasimbiswa yakasanganiswa - vibro kongiri. Inodzivirira kwazvo kumamiriro ekunze. Zvimwe zvinhu zvinogadzirwa nesimbi yepamusoro simbi. Kuparadza kunodzivirira. Yakagadzirirwa vanhu vakaremara. Inowanikwa mune chando chinodzivirira chando - iyo vheji yacho inowedzerwo kubhadharwa.
Pedestal inonwa yakagadzirwa yakasimbiswa yakasanganiswa yakasanganiswa - vibro kongiri. Inodzivirira kwazvo kumamiriro ekunze. Zvimwe zvinhu zvinogadzirwa nesimbi yepamusoro simbi. Kuparadza kunodzivirira. Inowanikwa mune chando chinodzivirira chando - iyo vheji yacho inowedzerwo kubhadharwa.
5 / 5 ( 42 mavhoti )
mvura yakachenamvura yemaharazvitubukunwa matsime emvurazvitubu zvegutapitnikpitnikizvirongo zvemvuravanonwa dorovanomwa doroelkay vanonwavanonwa dorovanogadzira zvinwiwavanonwa zvemukativanonwa zvekunzechidhakwachidhakwa chechikorokubva paipimvura yezvikorotap mvurakumwa mvura spaschitubutsime remvura yekunwachitubukunwa mvura chitubu